Momba ny tetikasa
Fandefasana entana avy any Soisa
Ny servisy Swiss Apteka dia manome tolotra ho an'ny fividianana sy fandefasana entana avy any Soisa. Tsy misy afa-tsy amin'ny famokarana ofisialy, fivarotana ary mivantana avy amin'ny mpamokatra. Ny mandefa dia atao amin'ny alàlan'ny mailaka ao Soisa.
Azonao antoka fa mahasoa ny soisa Soisa ny entana atolotra.
1) Fanaterana fenitra amin'ny herinandro 2-3 (Swiss Post)
2) Ny fandefasana maika hatramin'ny ora 48 na aiza na aiza any Eropa, hatramin'ny ora 72 na aiza na aiza eto ambonin'ny tany (toerana iaingan'ny sidina ny fiaramanidina). Misy ny famerana amin'ny fomba amam-panao. Famaritra manokana ny vidin'ny fandefasana sy ny fandefasana.
Ny entana dia alefa any Soisa amin'ny orinasam-pifandraisana sy ny postal. Any amin'ny firenena tsirairay dia misy ny faneriterena amin'ny fandefasana ny saram-pandefasana farafaharatsiny, azafady, raiso izany amin'ny lamandy.
Fandefasana any Eorôpa. Ny latsaky ny fepetra dia miankina amin'ny fepetra voalazan'ny didim-panjakana ary dia mamaritra manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay.
Fandefasana any Azia: Azo atao any Hong Kong ny fandefasana ny parcel avy any Soisa, avy any amin'ny toerana ahafahanao manondrana orinasam-pitaterana hafa any Azia. Ankoatra izany, azonao atao ny mandray ny parcel navoakan'ny Swiss Post tany amin'ny biraon'ny paositra izay toerana iainanao.
Fandefasana any Etazonia. Ny fanafody vitaminina sy fanafody tsy misy ordinatera tsy misy famerana, ho an'ny medikaly fanafody, mamaritra fanampiny.
Fandefasana any Rosia. Ny fandoavam-bola ho an'ireo banky 15.000 ao Rosia dia raisina an-tsoratra. Ny vokatra dia lafo kokoa noho i 15.000p. Nalefa tamim-bola feno. Ny rindrambaiko maoderina mifandraika amin'ny sisin-tany dia avy amin'ny Mpividy, raha tsy nandalo ny fomba amam-panao ny volanao, dia averina any Switzerland izany. Ny sanda rehetra amin'ny tranokala dia efa voatanisa miaraka amin'ny fandefasana an'i Moskoa.
Azonao atao ny mandidy ny vokatra, mendrika ny 1000 euros. Ny vokatra dia lafo kokoa noho ny 1000 euros tsy nentina ho any Rosia noho ny fameperana ho an'ny fako, na eo ambany fifehezan'ny customs amin'ny sandan'ny 30% ny sandan'ny entana.
Fandefasana any amin'ny firenen-kafa. Fandefasana mailaka standard.
Noho ny fanampian'ny serivisy Swiss-Apteka dia azonao atao ny mandidy medikaly, vitamina, kojakoja medikaly, vokatra ho an'ny ankizy ary vokatra hafa any amin'ny fivarotana sy ny famoaham-bola any Soisa sy ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao. Ankoatra ny soso-kevitra atolotra, azonao atao ny mandidy ny vokatra hafa mifandraika amin'ny fampiasana manokana izay tsy azo ividianana any amin'ny firenenao.
Raha manana fanontaniana fanampiny ianao na manana tolotra fiaraha-miasa dia manorata any amin'ny info@swiss-apteka.com